Waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda, laga bilaabo cathedral ilaa hermitage ee San Saturio | Wararka Safarka
Luis Martinez | 28/12/2021 13:36 | Magaalooyinka Spain, Guides
Hadaad yaabto waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda Sababtoo ah waxaad qorsheyneysaa inaad booqato magaalada Castilian, waa inaad ogaataa inay leedahay dhaxal taallo aan caadi ahayn. Dhab ahaantii, waxaa la yaab leh in magaaladan yar (iyo afartan kun oo qof oo kaliya) ay leedahay dhaxal intaas le'eg.
Sida tan, waxay u dhaxaysaa wakhtiyadii Roomaanka ilaa hadda, iyada oo loo marayo qarniyadii dhexe, Renaissance, Baroque ama Neoclassicism. Sidaa darteed, kuma habboona kala duwanaansho weyn iyo hanti taallo. Intaa waxaa dheer, Soria waxay leedahay meelo badan oo cagaar ah. Oo, haddii kuwani ay kuugu muuqdaan wax yar, waxay leedahay jawi dabiici ah oo cajiib ah oo dhismayaasha taariikhiga ah ay sidoo kale ku badan yihiin. Laakin, annagoon xamaasad dheeraad ah lahayn, waxaanu ku tusi doonaa wax kasta oo aad ku aragto Soria iyo agagaarkeeda.
1 Waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda, laga bilaabo taallooyinkii magaalooyinka ilaa deegaanka dabiiciga ah
1.1 Duqa Plaza, waxa ugu horreeya ee lagu arko Soria
1.2 Co-Cathedral ee San Pedro
1.3 Kaniisadaha kale ee lagu arki karo Soria
1.4 Soria darbiga iyo qalcaddii
1.5 Guryo sharaf leh
1.6 agagaarka Soria
Waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda, laga bilaabo taallooyinkii magaalooyinka ilaa deegaanka dabiiciga ah
Waxaan bilaabi doonaa jidkayaga Soria, kuwaas oo taallooyinkoodu aanay waxba u dhimin kuwa Segovia o Avila, oo ku taal bartamaha magaalada Castilian. Ka dib waxaan u dhawaan doonaa muuqaalada iyo taalloyinka xaafadaha, si kastaba ha ahaatee, si isku mid ah u qurux badan oo ku soo jiidan doona. Waxaas oo dhan adiga oo aan iloobin matxafyada xiisaha leh ee ay ku siiso.
Duqa Plaza, waxa ugu horreeya ee lagu arko Soria
Fagaaraha weyn ee Soria
Si aan u fulino qorshahayaga, waxaan ka bilownay socdaalka Soria Duqa Magaalada Plaza, xarunta dareemeyaasha dhabta ah ee magaalada. Porticoed oo leh Isha Libaaxyada Xarunteeda, oo la dhisay 1798-kii, waxay leedahay dhowr taallo oo, iyaga laftoodu, ay sabab u tahay booqashada Soria.
Waa kiiska Qasriga Dhegaystayaasha, dhisme soo jiidasho leh oo miyir-qabka neoclassical laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad oo maanta leh xarun dhaqameed. Sidoo kale ka Guriga laba iyo tobanka abtirsiimada, kaas oo wejigiisu yahay qaabkii Herrerian ka dib, iyo ka mid ah Aqalka Guud, Maanta Kaydka Dawladda Hoose. Sidoo kale, waxaad ku arki kartaa Plaza Mayorka Doña Urraca Palace, kaas oo hadda qaabkiisu ka soo bilaabmay qarnigii toddoba iyo tobnaad, iyo ka Hoolka Magaalada oo ay ku dheggan tahay guri weyn, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii XNUMX-aad.
Co-Cathedral ee San Pedro
In kasta oo ay ilaalinayso hadhaagii kaniisaddii monastic ee hore laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad, waxaa la dhisay XNUMX-kii ka dib qormooyinkii qaabka plateresque. Waxay leedahay qorshe qolka fadhiga oo leh saddex nab oo loo qaybiyay shan qaybood iyo saqafyo xiddigeed oo qaabaysan. Inside waxaa ku yaal dhowr kaniisadood iyo meesha allabariga ugu weyn, shaqada Francisco del Rio qarnigii lix iyo tobnaad. Marka la eego dibadda, the Albaab quduuska ah iyo munaaradda, oo leh dawanno cajiib ah.
Laakiin dahabka weyn ee Co-Cathedral waa iyada xaleef, waxaa lagu dhawaaqay taallo qaran sanadkii 1929. Waxaa laga soo galo albaab leh qaanso wareeg ah waxaana la dhisay qarnigii XNUMXaad. Saddex ka mid ah qolalkeeda qafilan ee leh caasimadyo ka dhigan xayawaanno fantastik ah, dhir iyo marinnada Baybalka. Laga soo bilaabo armaajooyinka, waxaad sidoo kale ka heli kartaa Refectory, kaas oo hadda ku yaala Matxafka Diocesan.
Kaniisadaha kale ee lagu arki karo Soria
Kaniisadda San Juan de Rabanera
Magaalada Castilian mar waxay lahayd soddon iyo shan kaniisad, laakiin qaar badan oo kaniisadaheeda ah ayaa la waayay. Si kastaba ha ahaatee, ka mid ah kuwa la xafiday, waa inaan kugula talineynaa inaad booqato saddex: San Juan de Rabanera, ee Marwadayada Espino iyo kan Santo Domingo.
Midka ugu horreeya waxaa iska leh Romanesque daahay wuxuuna ahaa Taallada Qaranka tan iyo 1929. Dhinaceeda, kan labaad wuxuu ku yaal sawirka ilaaliyaha magaalada waxaana la dhisay qarnigii XNUMXaad ka dib canons Plateresque oo ku yaal hadhaagii kaniisad kale oo hore. Sida midka Santo DomingoSidoo kale waa Romanesque, laakiin asalkeeda ugu weyn ayaa ku yaal wejigeeda. Waa saddex-midnimo oo ay ku wareegsan yihiin afar kayd oo leh muuqaallo kitaabi ah oo la xardhay, waxaana jira shan nooc oo keliya oo adduunka ah.
Sida aan kuu sheegnay, sinaba maaha kaniisadaha kaliya ee lagu arko Soria iyo agagaarkeeda. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato kuwa San Nicolás, San Ginés, Santa María la Mayor ama San Miguel de Cabrejas.
Soria darbiga iyo qalcaddii
U guurista dhismaha madaniga ah ee Soria, waxaanu marka hore kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan derbiga dhexe. Waxaa la dhisay qarnigii 4100aad, dhererkeedu wuxuu ahaa XNUMX mitir oo qaab afar geesood ah. Hadda, qayb wanaagsan oo ka mid ah waa la ilaaliyaa, inkasta oo aan albaabadeeda ahayn. Taa beddelkeeda, waxaa weli jira laba albaab ama albaabo yaryar: San Ginés iyo San Agustín.
Dhankeeda, Qasrigan oo hadda burbursan, ayaa qayb ka ahaa darbiga, waxaana la rumeysan yahay in la dhisay waqtiyo Fernan Gonzalez. Maanta waxa aad arki kartaa hadhaagii kaydka, xayndaabka gidaarka gudaha ah iyo gelitaankeeda, oo ay ku wada siman yihiin laba xabbadood.
Dhanka kale, buundada dhexe ee magaaladaWaa run in dhowr jeer dib loo soo celiyay. Waxay ku dhisan tahay dhagax, cabbirkeeduna waa boqol iyo laba iyo toban mitir, waxayna leedahay siddeed geesood oo wareeg ah. Waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato habeenkii, maadaama ay leedahay iftiin habeenkii ah oo qurux badan.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato Charles IV buundada, laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad iyo birta, oo la dhisay 1929 sidii marin loogu talagalay jidka tareenka ee u dhexeeya Soria iyo Torralba.
Guryo sharaf leh
Qasriga tirinta Gómara
Qayb wanaagsan oo ka mid ah dhaxalka taallo ee lagu arko Soria iyo agagaarkeeda waxay ka kooban yihiin daaro sharaf leh. Waxaa sidoo kale ka mid ah laba ka mid ah: tirooyinka Gómara iyo kuwa Los Ríos iyo Salcedo.
Midka ugu horreeya waxaa la dhisay dhammaadkii qarnigii 2000aad iyadoo saameyn badan ku leh qaabka Herrerian waxayna ahayd Goob xiiso dhaqameed tan iyo XNUMX. Si cajiib leh, Palace ee Wabiyada iyo Salcedo Waxa dhisay isla qoys kii hore sameeyay. Waxay ku jirtaa qaabka Renaissance oo ay hadda ku taal Kaydka Taariikhiga ah ee Gobolka.
Guryahaas sharafta leh, waxaad ku arki kartaa qaar kale oo badan oo Soria ah. Waanu ku iftiimin doonaa Daaraha waaweyn ee Castejones iyo Don Diego de Solier, kuwaas oo midaysan, sidoo kale ee Golaha Deegaanka, taas oo ah neoclassical oo ku siinaysa taallo xiisa leh oo xagga hore ah.
Dhankeeda, dhismaha ee Wareega Saaxiibtinimada Numancia Waa hanti aad u qurux badan qarnigii XNUMX-aad. Gudaha, Hoolka muraayadaha iyo Matxafka Abwaanada, u heellan kuwii soo maray Soria iyo aayadaha u heellan: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado iyo Gerardo Diego.
Inkasta oo aan ka tagnay qaybo ka mid ah taallooyin ku yaal dhuumaha, waxaan hadda kuu sheegi doonaa hareeraha quruxda badan ee magaalada Castilian iyo dhaxalka ay sidoo kale leeyihiin. Marka qalcaddii park, oo ku yaal meesha ay tani ku taal, waxaad leedahay aragtida ugu fiican si aad u aragto Soria barta ugu sareysa. Si kastaba ha ahaatee, sambabada cagaaran ee ugu weyn ee magaalada waa Alameda de Cervantes park, halkaas oo ay jiraan in ka badan boqol iyo soddon nooc oo dhir ah.
Waxaad sidoo kale dhex mari kartaa Paseo de San Polo iyo, xagaaga, ku maydho Sotoplaya del Duero. Kaliya qaadashada dariiqan waxaad gaari doontaa meesha hermitage ee San Satio, mid ka mid ah macbadyada ugu xiisaha badan ee magaalada Castilian oo u heellan ilaaliyaha. Waxa la dhisay qarnigii XNUMX-aad tiro godad ah iyo qolal laga qoday dhagaxa. Gudaha waxaa ku yaal darbiyada Baroque iyo meesha allabariga sidoo kale waxaa iska leh qaabkan.
Dhanka kale, qiyaastii siddeed kilomitir ayaa magaalada u jirta Buur Valosandero, taas oo ah mid ka mid ah meelaha ay jecel yihiin Sorians si ay u aadaan socodka oo ay ku raaxaystaan ​​dabeecadda. Markaad ku socotid qaar ka mid ah waddooyinkeeda, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sawirada godad laga soo bilaabo xilligii Bronze.
Laakiin, haddii ay jirto meel ay tahay inaad ku aragto agagaarka Soria, tani waa meesha ay ku hareeraysan yihiin burburka Numantia, dadkii hore ee Celtiberia kuwaas oo si geesinimo leh uga hortagay go'doominta ciidamada Roomaanka ilaa ay ka dhammeeyeen inay si wadajir ah isu dilaan. Gaar ahaan, waxay ku taal Cerro de la Muela waxayna leedahay madadaalo guryaha iyo dhismayaasha kale ee wakhtigaas.
Kaabista muhiimka ah ee booqashadan waa Matxafka Numantino. Waxay ku yaalliin qaybo badan oo ka mid ah qaybaha laga helay goobta magaalada qadiimiga ah, laakiin sidoo kale kuwa kale oo xitaa ka weyn, oo ka tirsan Paleolithic iyo Age Iron.
Hermitage ee San Bartolomé, oo ku taal canyon ee webiga Lobos
Dhanka kale, burburka soo rogaya ee Monastery ee San Juan de Duero. Waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad, waxaan gaari doonaa iyada oo sii mareysa buundada Roomaanka. Waqtigan xaadirka ah, tiirarkii haybadda lahaa ee gunteeda, oo lagu qurxiyey gargaar, ayaa si dirqi ah loo ilaalinayaa.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato Lobos canyon webiga, xitaa ka cajaa'ib badan meeshii hore oo ku taal beerta dabiiciga ah ee isku magaca ah. dhexdeeda, oo ay gabbaad ku yihiin buuro dhaadheer, ayaa ah Hermitation ee San Bartolomé, samaynta goob ay ka buuxaan suufiyaal. Waxaa la dhisay rubuci hore ee qarnigii XNUMXaad ee Templars, waxay isku daraysaa Romanesque iyo Gothic waxayna qayb ka ahayd guri keniisad ah oo hadda la waayay.
Inta lagu jiro beertan dabiiciga ah, waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo aad ku gaari karto waddooyinka socodka si aad u hesho aragtiyo qurux badan oo kanyon ah. Waxaa ka mid ah, kan Costalago, kan Lastrilla iyo kan La Galiana. Waxa kale oo aad samayn kartaa safarrada baaskiilka iyo xitaa fuulista fardaha.
Gabagabadii, wax badan ayaanu ku tusnay waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda. Ma hayno meel aan ku xusno dhammaan yaababka magaalada Castilian iyo kuwa ku hareeraysan. Laakin kama diidno in aan ku soo xigano dadka sida Burgo de Osman, oo leh Cathedral-ka cajiibka ah ee Santa María de la Asunción iyo Isbitaalka de San Agustín; Medinaceli, oo leh Duqa Magaalada Plaza ee cajiibka ah, ama Vinuesa, oo leh hiddo diimeed oo ballaadhan, oo ku yaal meel u dhow Laguna Negra iyo glacial cirques ee Sierra de Urbión. Miyayna fikrad fiican ahayn inaad booqato dhammaan yaababkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda